सौगात र आकाशमध्ये अभिनेत्री पूजा कसकी बेहुली ? – Everest Dainik – News from Nepal
सौगात र आकाशमध्ये अभिनेत्री पूजा कसकी बेहुली ?
काठमाडौं, असार ८ । अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठले तेस्रो पटक सहकार्य गरेको चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’को छायांकन पूरा भएको छ । एक गीत खिच्न बाँकी राख्दै शुक्रबारबाट चलचित्र प्याकअप भएको निर्देशक शिशिर राणाले जानकारी दिए । आगामी कार्तिक ८ गते दिपावलीमा फिल्म रिलिज हुँदैछ । ‘रियल जोडी’ सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठको पनि यसमा अभिनय छ ।
छायांकन सकिएसँगै निर्माण टिमले चलचित्रप्रति दर्शकको कौतुहलता बढाउने केही तश्विर बाहिर ल्याएको छ । सार्वजनिक तस्वीरमा पूजालाई बेहुलीको पहिरनमा देख्न सकिन्छ भने, आकाश र सौगात बेहुलाको भेषमा देखिएका छन् । एक तस्वीरमा आकाश र पूजालाई दुलहा–दुलहीको पहिरनमा रोमान्टिक मुडमा देख्न सकिन्छ । सौगात भने एक्लै देखिएका छन् ।
‘पोइ पर्‍यो काले’मा सौगात र पूजा श्रीमान्–श्रीमतीको भूमिकामा रहेको चर्चा छ । तर, निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको तश्विरले पूजाको श्रीमान् आकाश हुन् वा सौगात भन्नेमा दोधार बनाउँछ । निर्देशक राणा फिल्म हेरेपछि यसको जवाफ पाउने बताउँछन् । चलचित्रको मुख्य ट्विस्ट नै यही रहेको उनको भनाई छ । यस फिल्मको मूल कथा भने सौगातको वरिपरि घुमेको छ ।
पहिलो पटक पूजा र सौगातलाई ठूलो पर्दामा हेर्न दर्शक निकै आतुर छन् । सोहित मानन्धर, सुरक्षा पन्त, राजाराम पौडेल, विन्दा खतिवडा, जयनन्द लामा लगायतका कलाकारहरुको पनि यसमा अभिनय छ । फिल्मको कथा निर्देशक राणा स्वयंले लेखेका हुन् । शिव ढकालले फिल्म खिचेका हुन् । फिल्मका गीतमा सुवास भुषाल र पुरुषोत्तम न्यौपानेले संगीत भरेका छन् ।
तारा प्रकाश ‘किम्भे’को सम्पादन रहने फिल्मको प्रस्तुतकर्तामा श्याम बहादुर थापा रहेका छन् । दिपक मनाङ्गे र अ. देवी राई निर्माता रहेको यस फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा किरण नेपाली र रधु परियार छन् । सह–निर्मातामा अर्जुन खनिया र देव तामाङ रहेका छन् । निर्देशक राणा ‘पोइ पर्‍यो काले’ कमेडी कथावस्तुमा आधारित भएर बनेको बताउँछन् । यस फिल्मको दर्शकमा व्यग्र प्रतिक्षा छ ।